ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၏ လက်ရှိ ဌာနချုပ်တည်ရာ လိုင်ဇာမြို့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတခုတွင် လက်နက်ကိုင် ကချင်စစ်သည်များကို တွေ့ရသည့် မှတ်တမ်းပုံ
အလားတူ လားရှိုး မူဆယ် ကားလမ်းကို ဒီကနေ့ ပ်ိတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ အတည်ပြုချက် မရရှိပါဘူး၊။ ဒီကားလမ်းတလျှောက် KIO တပ်မဟာ ၄ က ပစ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မူတွေ ရှိတယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ရှေ့ဆက်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ KIO ဆွေးနွေး
ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ KIO တို့ တရုတ် ကူမင်းမှာတွေ့မည်
ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်လုပ်ချင်ရင်၊မြန်မာစစ်တပ်ကအရင် ရှေ့တန်းစခန်းတွေပြန်ရုတ်သိမ်းရမယ်။ ပြီးမှစားပွဲပေါ်ဆွေးနွေးလို့ရမှာ။ ကိုယ့်သားသီးတွေကိုယ်ပြန်သတ်နေတာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲလူလောကမှာရှိမယ်မထင်ဘူး။
အဲ့လိုသာဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ အစိတ်စိတ်ကွဲတော့မှာပေါ့ ကို့လူ အဘိုးအို နဲ့သားတို့ ရဲ့ ထင်းစီးချိူးတဲ့ ပုံပြင်လေးကို သတိရစေချင်ပါတယ် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုရအောင်တည်ဆောက်နေချိန်မှာဒါမျိူးတွေကိုတော့ မပြောသင့်ပါဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီအခြေအနေရောက်လာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရတာ အသက်တွေ အချိန်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်ဆို တာ မမေ့ ပါနဲ့ သင်ထင်သလို တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံနဲ့စစ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ ရင် နောင် နှစ် ၅၀ ၆၀လောက်မှာ့ ခု အခြေ အနေ ပြန်ရချင်မှာ့ ရပါလိမ့်မယ်
May 29, 2012 07:42 AM
If the war difuse, all the people will be in trouble.Do'nt be fool!
May 29, 2012 07:05 AM
I would like to tell Myanmar GOV be peace for country. No more civil war and don't killing each either be united or union.
ဒီတိုက်ပွဲ တစ်နိင်ငံလုံးကို ပြန့်သွားရင်ကောင်းတာပေါ့ အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေအတွက်တို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်ရဖို့ အထိကဘဲ။ အခုချုိန် ဒိမိုကရေစီ ဆိုတာ တို့ရင်းသားတွေအတွက်တော့ တိုက်ပွဲရဲ့အစဘဲ။